अर्थ / वाणिज्य > सेयर बजार
आश्विन ४, २०७४ काठमाण्डौ । सुनसरीको इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स बित्तीय संस्थाले दशैं विदा सकिएलगत्तैदेखि साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्ने भएको छ । यो माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले एकसय रुपैयाँ अंकित ...
आश्विन ४, २०७४ नेप्से प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नियुक्तीको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। असारको अन्तिम सातादेखि सिताराम थपलियाको कार्यकाल सकिएपछि नेप्से सिइओविहीन छ। नेप्से सिइओको पद ...
भदौ २३, २०७४ काठमाडौं– सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदका लागि ५ जनाको नाम छनोट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आवेदन परेका मध्येवाट शुक्रबार ...
२२ भाद्र, २०७४ काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुलाई जस्तै अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई समेत मर्जर वा एक्वीजिसनमा लगिने भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. ...
Aug 31, 2017 काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने भएको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी शेयर बजारमा भित्र्याउन ...
भदौ १४, २०७४ नियामक निकायका बहुसंख्यक कर्मचारीले कानुनविपरित दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीसहित विभिन्न कानुनले नियामक निकाय राष्ट्र बैंक बिमा समिति अर्थ ...
काठमाडौं, भदौ १२ म्युचुअल फण्ड एनएमबि सुलभ फण्ड १, जलविद्युत कम्पनी ङादी ग्रुप पावर र देव विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन्। एनएमबि क्यापिटलले सुलभ फण्ड १ का लगानीकर्तालाई करसहित २१. ...
साउन २९, काठमाण्डौ । सानिमा माई हाइडोपावर लिमीटेडले आज(शुक्रबार)देखि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला गरेको छ । यो जलविद्युत कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित दरका कुल ...
२७ श्रावण २०७४, काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार सुधारका लागि पछिल्लो समय निकै धेरै प्रयासहरु गरेको छ । बजारलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने उसको प्रयासलाई सर्वत्र सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ ...
धितोपत्र बोर्डका सदस्यहरुले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गर्न नपाउने
साउन २०, २०७४ काठमाडौँ।नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुचिकृत संगठित संस्थाहरुकालागि सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका बनाउने तयारी थालेको छ । बोर्डले नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४ बनाई लागु गरेको जनाएको छ । ...
होटलको शेयरमा आकर्षण
१७ श्रावण २०७४,काठमाडौं । शेयर बजारमा सोमबार होटल समुहको शेयरमा आकर्षण देखिएको छ। गत आर्थिक बर्षको ब्यालेन्स सिट प्रकाशित हुने समय नजिक आउँदा होटलमा लगानीकर्ताको चासो देखिएको हो। नेपाल ...
एनआर्इसी एशिया क्यापिटलको 'मेरो शेयर'
१३ श्रावण २०७४,काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले हितग्राही खाता भएकालार्इ सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको 'मेरो शेयर' सफ्टवेयर सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीमा खाता भएकाले कारोवारको जानकारी अनलाइन ...
नगद लाभांश पनि नलाने हुस्सु सेयरधनी !
१२ श्रावण २०७४,बिहीवार काठमाडौं । काठमाण्डौ । आफूले लगानी गरेको बैंक, बित्तीय संस्था तथा सूचिकृत कम्पनीहरुले कहिले लाभांश देलान् भनेर लगानीकर्ता प्रतिक्षा गरेर बसेको हुन्छ । कुनै कम्पनीले राम्रो लाभांश ...
सोमबार पनि नेप्सेमा देखिएन सुधार, बजार ६ अंकले झरेपनि कारोबार रकम एक अर्ब नाघ्यो
०९ श्रावण २०७४,काठमाडौं । साताको पहिलो दिनदेखि नै घट्न सुरु गरेको शेयर बजार सोमबारपनि घटेको छ । कारोबार मापक सूचक घटेपनि कारोबार रकम भने एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ...
०९ श्रावण २०७४,काठमाडौं । ‘धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४’ ले सूचिकृत कम्पनीको साधारणसभाले एकपटक हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । ...
नेप्सेको महाप्रबन्धक नियुक्ती प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
०९ श्रावण २०७४,काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को महाप्रबन्धक खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुने भएको भएको छ। सरकारले रिक्त महाप्रबन्धक छनौट समिति बनाएर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। ...
८ श्रावण २०७४,काठमाडौं । विभिन्न १९ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बोर्डकाअनुसार ती सबै कम्पनीले तोकिएको समयमा नै हकप्रद शेयर जारी गर्न ...
धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ अनुसार: हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर बाँडफाँड
२०७४ श्रावण ४,काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनरले निष्कासन गरेको साधारण शेयर बुधबार बाँडफाँड भएको छ। धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ अनुसार, सबै लगानीकर्ताले १० कित्ता शेयर पाउने गरि बाँडफाँड भएको निष्कासन तथा ...
हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरको बाँडफाँड साउन ४ गते
२०७४ श्रावण ०३,काठमाडौं । हिमालयन पावर पार्टनरले निष्काशन गरेको साधारण शेयरको बाँडफाँड साउन ४ गते बुधबार हुने भएको छ। धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ अनुसार, सबै लगानीकर्ताले १० कित्ता शेयर पाउने ...
शेयरमा भ्याट कार्यान्वयन विरुद्ध जाग्यो इन्भेष्टर फोरम, साउनदेखि शेयर खरीद बिक्री नगर्ने
२०७४ अषाढ २९,काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर फोरमले शेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गर्दै साउनदेखि शेयर खरीद बिक्री रोक्ने निर्णय गरेको छ। फोरमले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्याटमा ...